Imvume kunye nentsha | Isiseko soMvuzo: Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Umthetho Imvume kunye nentsha
Imbango yemvume yesondo kunye nentsha iyinkimbinkimbi.
Ubudala bemvume kwanoma yiluphi uhlobo lwezenzo zesondo ngu-16 kubabhinqa nabasetyhini, ukwenzela ukuba nayiphi na imisebenzi yesondo phakathi komntu omdala kunye nomntu phantsi kwe-16 ityala lolwaphulo-mthetho. Ubudala bemvume lufana nantoni na ngesini okanye ukuxhatshazwa ngokwesondo.
Ukwabelana ngesondo (ubulili, isilwane) kunye nesondo ngomlomo phakathi kwabantu abatsha abaneminyaka elidala abaneminyaka eyi-13-15 nazo zamatyala, nokuba ngaba bobabini abalingani bavuma. Umntu okhuselekileyo unokuthi ukuba omnye wabalingani bakholelwa ukuba omnye uneminyaka eyi-16 okanye ngaphezulu.
Kukho ukukhuseleka okunokwenzeka ukuba umsebenzi wesondo awubandakanyi ngesondo somlomo okanye ngomlomo. Laba ukuba umntu omdala ukholelwa ukuba umntu omdala uneminyaka eyi-16 okanye ngaphezulu kwaye abazange bahlawuliswe ngaphambili ngesenzo esifanayo, okanye ukuhluka kweminyaka kungaphantsi kweminyaka emibini.
Isikhokelo kuRhulumente waseScotland Uyavuma ukuba akusiyo yonke imeko yesenzo sezesondo phantsi kwe-16 iya kuba neengxaki zokukhusela abantwana, kodwa abantu abaselula basenokufuna inkxaso malunga nokuphuhliswa kwabo ngokwesondo kunye nobudlelwane.
Oku kuncinane yokuzonwabisa malunga nemvume kwimicimbi yesondo. Ingasetyenziselwa ukuvula ingxoxo ngalo mbandela ubalulekileyo. Ngelixa abanye abantu becinga ukuba ingxoxo malunga nokwabelana ngesondo kufuneka ibe yeyabazali bodwa, kukho indima ebalulekileyo ekufuneka idlalwe zizikolo ngakumbi ekufundiseni isayensi emva kwempembelelo yephonografi. Abazali kufuneka bahlale bekwimeko yophuhliso kule ndawo kwaye bathethe rhoqo nabantwana babo malunga nayo. Abazali ngabona bantu bayimizekelo kunye nabasemagunyeni kubomi bomntwana, nangona kunjalo bekhohlakele.
Imvume kwisenzo socansi yinto ebaluleke kakhulu, ngakumbi phakathi kwabaselula kunye nabaselula. Wonke umntu uthetha ngesondo kwaye abaninzi banomncintiswano ukuba babone ngubani oza kuqala ukuzama imisebenzi emitsha. Ukufikelela ngokubanzi kwimizila engamanyala nge-smartphones kunye neepilisi kuthetha ukuba abantu abaselula bafunda ngesondo kwaye 'bathanda' kubenzi bezentengiso zentengiso ngendlela abazali abaninzi abayifumana ngayo into enyanyekayo. Iifoto zoonografi namhlanje azifani neyona nto elula Uhlobo lwe-Playboy iimagazini zangaphambili. Ubundlobongela, ubundlongondlongo kunye nokuhlaselwa ngokwesondo kwabasetyhini okanye abesilisa ababhinqileyo yinto eqhelekileyo kwi-90% yeevidiyo ezifumaneka simahla. Ukubukela yonke imihla le nto kangangeminyaka ngaphambi kokudibana kunye nomntu wokwenyani kunokubethelela ukuqonda kolutsha, eyindoda okanye eyasetyhini, malunga nokukhuselekileyo, ukuthanda, kunye nokwabelana ngesondo.
amantombazana bafuna ukuthandwa, kubonwa njengezocwangco kwaye ngokuqhelekileyo bavulelekile. Oku akuthethi ukuba bakulungele ukulala ngesondo. Bafunda nje indlela yokujongana namaqumrhu abo axhatshazwa ngokwesondo. Njengoko bezama ukuzama ukujonga iimpawu ezintsha kunye nokuziphatha kwabo, kubonakala ngathi bafana nabafana. Ukufunda ngemida kunye nokwenza iimpazamo yinto eqhelekileyo yokufunda ngoqhagamshelwano. Omnye umfana osemdala wase16,
"Andiyazi into endiyifunayo. Ndifuna nje ukuthandwa ... Ndifuna ukuzama oko bonke abantu abakuthethayo kwaye bathi bakwenzayo. "
Uye wathi kwakhona uye wanyanzelwa ukuba enze izinto zesondo awazisolayo ngazo emva koko. Akafuni kuhlaziswa njengesikhova. Amantombazana amaninzi acinga ukuba “kukungabi nasimilo” ukuyekisa amakhwenkwe emva kokuba eqalile 'ukusondelelana'. Abasetyhini bayo yonke iminyaka kufuneka bafunde ukuba nokuzithemba kunye nokuseka imida ecacileyo malunga noko bekhululekile ukukwenza.
Boys Ngakolunye uhlangothi unamandla lamandla ngokwesini afuna ukuvavanya idrayivu kunye neqabane. Bafuna ukubonwa njengamadoda okwenene emehlweni abo babesilisa. Bangakwazi ukuzimisela kwaye banomdla omnye ekufezeni ezo njongo. Ukunyaniseka kwiqela lendoda ngokuqhelekileyo kunamandla kunomnqweno wokubambisana kunye okanye intombazana kunye nentombazana. Bafunda nje ukulawula loo mandla amatsha ngokwesini kwimimandla yabo. Baye bathambekele ekwenzeni iziphoso ezinzulu zesigwebo malunga nokuba yintoni iqabane elivumelana nalo.
Ngoko ngelixa imizimba inokutshintshana, ingazi, izibonakaliso zesondo, ayithethi ingqondo yomntu ngamnye ulungele ukubandakanyeka ngesondo ngendlela enye. Akunjalo ngaso sonke isikhathi umfana onamandla amakhulu, amabhinqa amaninzi ahamba phambili ekuqaliseni ukuziphatha ngokwesondo. Yilapho iimeko ezintle zemvume, uzame ukudlwengulwa nokudlwengulwa kwezityalo.
Ukufundisa abantu abancinci malunga nokunxibelelana kwiimeko ezintle kubalulekile ekuphuculeni uphuhliso lwezesondo olufanelekileyo.